Ma rumeysan tahay in cunista baradhada la shiilay ‘Chips’ uu indho-la’aan kaa dhigi karo?! +(Akhri Warbixinta) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ma rumeysan tahay in cunista baradhada la shiilay ‘Chips’ uu indho-la’aan kaa...
Ma rumeysan tahay in cunista baradhada la shiilay ‘Chips’ uu indho-la’aan kaa dhigi karo?! +(Akhri Warbixinta)
Qof cunaya Chips, /Photo: GETTY IMAGES
Bristol (Halqaran.com) – Khubarada waxay ka digayaan halista “cunto iska badinta” ka dib markii will 17 jir ah uu beelay araggataas oo aan dawo lahayn. Waxay ka dhalatay inuu cuni jiray baradho la shiilay oo ah Chips (Jibsi) iyo Crisps.
Dhaqaatiirta indhaha ee magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa daweynaya wiilka dhallinyarada ah ka dib markii xaaladda aragga indhihiisa ay gaareen marxalad aan waxba laga qaban karin.
Tan iyo markii uu ka baxay Dugsiga Hoose, wiilkan wuxuu cunayay Baradho la shiilay, Rooti cad iyo mararka qaar oo uu qaadan jiray hilib dubay.
Tijaabada waxaa ka muuqdo in fitamiinnada ay jirkiisa ka dhamaadeen iyo nafaqo la’aan dhibaato u geysatay.
Joogteynta xad dhaafka ah ee hal nooc oo cunto ah
Wiilkan oo aan magaciisa la shaacin karin wuxuu dhaqtarkiisa u tagay markii uu 14 jirka ahaa sababo la xiriiray in uu dareemayay daal iyo caafimaad daro. Xilligaas waxaa jirkiisa ka dhammaaday nafaqada B12, waxaana la siiyay dawo. Balse si wanaagsan uma isticmaalin, waxna kama uusan qaban qaabkii uu wax u cunayay.
Seddax sano ka dib, waxaa lagu celiyay cisbitaalka indhaha ee Bristol sababo la xiriira in araggiisa uu si degdeg ah u sii daciifayay, sida lagu qoray wargeys sannadle ah oo arrimaha caafimaadka ka warrama.
Dr Denize Atan, oo daweeysay waxay tiri: “Cuntadiisii maalinlaha ahayd ee ugu muhiimsanayd waxay ahayd chips. Wuxuu sidoo kale cuni jiray cunto fudud iyo Crisps. Mararka qaarna rooti cad iyo qudaar”.
“Wuxuu taas ku sheegay in ay tahay in uu neceb yahay noocyo ka mid ah raashiinka uusanna u dulqaadan karin. Marka baradhada la shiilay ama la qallajiyay waxay ahaayeen noocyada keliya ee uu rabay inuu cuno.”
Dr Atan iyo asxaabteeda la shaqeeya waxay dib u eegeen heerka fitamiinada wiilka yar waxayna ogaadeen in nafaqada B12, fitamiin D iyo kuwa kale ee muhiimka ah iyo macdanta sida naxaaska iyo selenium ay jirkiisa ka dhammaadeen.
Natiijooyiinka laga argagaxay
Ma uusan buurneyn, caatana ma ahayn, balse nafaqo la’aan ayaa haysay.
“Lafihiisa waxaa ka dhammaaday biyaha macdanta leh, taas oo ah wax laga argagaxo in lagu arko wiil da’diisa ah”.
Marka araggiisa la eego, wuxuu gaaray heer lagu daro dadka aragga la’.
“Waxba kama arki karo hortiisa,” ayey tiri Dr Atan. “Taas micneheedu wuxuu yahay in gaari uusan kexeyn karin iyo in ay ku adag tahay in uu wax akhriyo, TV daawada ama wejiyada kala garto.
“Balse keligii wuu socon karaa in kastoo arragiisu daciif yahay.”
Nafaqada neerfaha aragga la xiriira – taas oo ah midda uu wiilkan wajahayo – waala daweyn karaa, haddii xilli hore la billaabo. Haddii daweynta laga raago, neerfaha soo gudbiya aragga ayaa dhimanaha, dhibaatadana waxay noqoneysaa mid joogto ah.
Dr Atan waxay sheegtay kiisaska noocan ah in aysan badneyn, laakiin waalidiinta waa inay ka warhayaan halista badan ee ka dhalan karta joogteynta hal nooc oo cunto ah, ayna caruurta u raadiyaan talada khubarada caafimaadka.
Kuwa ay khuseyso arrintan; “Waxaa aad u wanaagsan in aadan ka walwalin joogteynta hal cunto, taa bedelkeeda waa in aad sideggan u barto hal ama laba nooc oo cunto kale ah”, ayey ku talisay.
Waxay sheegtay in dawada fitamiinnada badan isugu jira in ay bedel cunto noqon karto, balse ma lagu bedeli karo cuntada caafimaadka leh.
“Waxaa aad u wanaagsan in aad qaadato cuntooyiinka leh fitamiinada kala duwan,” ayey tiri, waxayna intaa ku dartay in iska badinta fitamiinnad qaar sida fitamiin A, uu isu bedeli karo sun. “haddaba uma baahnid in aad iska badiso”.
Dr Atan waxay sheegtay in dadka aan hilibka cunin ay halis sii kordheysa ugu jiraan in nafaqada B12 ay jirkooda ka dhammaato taas oo keeni karta aragga oo yaraada. Haddii aysan hilib cunin waa in ay wax kale ku bedelaan.
“Qamiirka nafaqeysan wuxuu xoojinayaa B12-ka ka maqan cunnadaada”, ayey tiri.
Meelaha ay dadka aan hilibka cunin ka heli karaan fitamiin B12 waxaa ka mid ah:
Cunidda quraac mishaari ah oo leh B12
Cabitaannada aan macaaneyn ee leh fitamiin B12
Waxyaabaha laga sameeyay qamiirka ee leh B12
Rebecca McManamon, oo ah dhaqtarka arrimaha cuntada iyo afhayeenka ururka dhaqaatiirta raashiinka ee Britain, ayaa sheegtay qaadashada hal nooc oo cunta ah uu yeelan karo sababo kala duwan sida cunta xumida, xasaasiyadda iyo autism-ka. Kuwaasna waxay u baahan yihiin qiimeyn gaar ah”.
“Dawooyiinka ka sameysan fitamiinnada badan waa kuwo lagu talinayo in la siiyo caruurta illaa shan sano ay ka gaarayaan”.
Chips uu indha la aan kaa dhigayo
Cunista baradhada la shiilay
indhaha kaa qaadi karo